Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 10 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Jimce Ah 10 june
June 10, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha oo Maalin kasta kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com.
Liverpool ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay 22 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Benfica ee Darwin Nunez. Sports
Wakiilka Nunez Jorge Mendes ayaa qarka u saaran inuu kulan la qaato Manchester United iyadoo Red Devils ay raadineyso inay afduubto weeraryahanka rikoorka u ah kooxda oo 85 milyan ginni ugu soo dhaqaaqaya Anfield. Express
Liverpool ayaa filaysa in Bayern Munich ay la kulanto qiimaheeda in ka badan 40 milyan ginni 30 jirka reer Senegal ee Sadio Mane, kaasoo ka caawin doona in ay ku soo iibsadaan Nunez ilaa 60 milyan ginni. Telegraph
Manchester United ayaa ka fikiraysa inay u dhaqaaqdo xiddigii hore ee khadka dhexe ee Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain oo 28 jir ah TalkSport
Kooxaha ugu waaweyn Yurub ayaa aaminsan in Raheem Sterling, oo 27 jir ah, uu diyaar u yahay inuu ka tago Manchester City xagaagan, iyadoo Chelsea ay ka mid tahay kuwa qiimeynaya dalabka. Telegraph
Barcelona ayaa wadahadalo kula jirta Manchester City Bernardo Silva laakiin kaliya waxay awoodaan inay la soo wareegaan 27 jirka khadka dhexe ee Portugal, waa haddii ay iibiyaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah Fabrizio Romano, Twitter
Kulan uu la yeeshay madaxda Barca , wakiilka Silva Jorge Mendes ayaa sidoo kale ka wada hadlay helitaanka weeraryahanka AC Milan ee Portugal Rafael Leao, 22, iyo Wolves’s Portugal khadka dhexe Ruben Neves, 25. Sport
Paris St-Germain ayaa Lille kala xiriirtay saxiixa Sven Botman ka dib markii uu istaagay wadahadaladii AC Milan , inkastoo Tottenham , Manchester United iyo Chelsea ay sidoo kale wax ka weydiiyeen daafaca reer Holland, 22, iyo Newcastle ayaa weli xiiseynaya. 90 min
Manchester City iyo Real Madrid ayaa isha ku haya horumarka ay sameynayaan daafaca reer England ee Reece James, oo 22 jir ah, kaasoo aan weli wax qandaraas ah laga siinin Chelsea . James waxa uu qaataa ku dhawaad ​​70,000 oo gini isbuucii, waxaana saddex sano uga hadhsan tahay heshiiskiisa haatan ee Stamford Bridge. Mail
Wakiilada garabka Brazil ee Antony ayaa ku sugan Yurub iyagoo isku dayaya inay heshiis la gaaraan Manchester United . 22-sano jirkaan ayaa ka hoos ciyaaray tababaraha Reds Erik ten Hag ee Ajax , waxaana lagu qiimeeyaa 60m euros (£51m) kooxda reer Holland. Goal Brazil oo Portuguese ah
Bayer Leverkusen ayaa u sheegtay Newcastle inay qorsheynayaan inay sii hayaan garabka France Moussa Diaby, 22, wixii ka dambeeya xagaagan. Express
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan, oo 31 jir ah, ayaa qandaraaskiisu dhacayaa 2023, waxaana doonaya Barcelona iyo Juventus . Bild – in German
West Ham ayaa diiwaan gelisay xiisaha ay u qabto saxiixa Everton Michael Keane iyadoo Toffees ay qarka u saaran tahay inay Hammers ku garaacdo saxiixa 29 jirka daafaca dhexe ee England James Tarkowski oo ka yimid Burnley. Football Insider
Liverpool ayaa dooneysa inay 42.5 milyan ginni ku fasaxdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Spain Gavi, inkastoo 17 sanno jirkaan uu doorbidayo inuu qandaraas cusub u saxiixo Barcelona . La Porteria, via Teamtalk
Oleksandr Zinchenko ayaa u furan inuu ka tago Manchester City xagaagan, laakiin kooxaha xiiseynaya, oo ay ku jiraan Wolves , Arsenal , Everton , Leicester iyo West Ham , waa inay dammaanad qaadaan 25 jirkaan inuu ka ciyaaro khadka dhexe, halkaasoo ciyaaryahanka garabka bidix uu ka ciyaaro. Ukraine. 90 min
Chelsea iyo Tottenham ayaa kula biiray Manchester City si ay ula socdaan xaalada daafaca bidix ee Spain Marc Cucurella, 23, ee Brighton .goal
City ayaa laga yaabaa inay amaah ugu dirto khadka dhexe ee Ingariiska James McAtee, 19, Seagulls si uu heshiis ugu helo Cucurella. Sun
Fenerbahce ayaa diwaan galisay xiisaha Manchester United Andreas Pereira laakiin Red Devils ayaa sidoo kale u sheegtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Brazil, oo 26 jir ah, in la siin doono fursad uu ku qanciyo tababaraha cusub Erik ten Hag inta lagu guda jiro isku diyaarinta xilli ciyaareedka. ESPN
Wolves ayaa 25 milyan ginni dul dhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ingariiska Morgan Gibbs-White, iyadoo 22 jirkaan lala xiriiriyay Nottingham Forest iyo Southampton ka dib xilli ciyaareedkii hore amaah uu kula joogay Sheffield United . Football Insider
Leeds United iyo Aston Villa ayaa wadahadalo la furay 18 jirka weerarka uga ciyaara Ingariiska Sonny Perkins, kaasoo seddex kulan u saftay kooxda koowaad ee West Ham . Guardian
Fulham ayaa ku dhow inay beeca xorta ah kula soo wareegto goolhayaha Albania Thomas Strakosha. 27 jirkaan qandaraaska uu kula joogo kooxda reer Talyaani ee Lazio ayaa dhacaya xagaagan. Sun
Middlesbrough ayaa Southampton kala hadashay heshiis amaah ah oo ay kula soo wareegayso weeraryahanka reer England Adam Armstrong, oo 25 jir ah TeamTalk
Tababarihii hore ee Jarmalka Joachim Low, oo 62 jir ah, ayaa xiiseynaya inuu ku laabto maamulka kooxda, waxaana uu tixgelin doonaa shaqada Paris St-Germain haddii Mauricio Pochettino uu baxo. Bild, via AS – in Spanish